मोटी केटिले पाउने पुरुष भाग्यमानी ! यस्ता छन् कारण « Khabar24Nepal
मोटी केटिले पाउने पुरुष भाग्यमानी ! यस्ता छन् कारण
विवाहका लागि कुनै केटीको कल्पना गर्दा पक्कै पनि जिउडाल मिलेको सुन्दरयुवतीको तस्विर अगाडि आउँछ । महिला पनि आफू सुन्दर देखिन कम खाना खाने अर्थात ‘डाइटिङ’ गर्छन् । तर मार्टेनियामा सुन्दरताको परिभाषा फरक छ । यहाँ मोटाघाटा महिला सुन्दर मानिन्छन् । विवाहका लागि पनि मोटीलाई नै रुचाइन्छ ।
अफ्रिकाको उत्तर पश्चिमी मुलुक मार्टेनियामा विवाहका लागि मोटी केटी पाउनुलाई भाग्यको रुपमा लिइन्छ । यसले विविह पछि सम्पन्नता ल्याउने विश्वास समेत गरिन्छ । त्यसैले यहाँका महिलालाई मोटाउन दवाव दिइन्छ ।
र महिला मोटो हुनुले उनीहरु सम्पन्न खानदानमा गनिन्छ । यो मान्यताले लोकप्रियता पाएको मार्टेनियामा विवाहका लागि पनि केवल मोटी केटीलाई नै मन पराईन्छ । यसक्रममा महिलालाई १६ हजार क्यालोरी खुवाइन्छ । एजेन्सी
विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न
पत्रकार शर्माको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह
बागलुङ दुर्घटनामा मृत्यु र घाइते हुनेको पहिचान खुल्यो (नामावलीसहित)